Miatrika fifanenjanana amin’ny fahatongavan’ny mpifindramonina ny Nosy Canary · Global Voices teny Malagasy
Mpifindramonina +23.000 no tonga tao hatramin'ny Janoary 2020
MpanoratraLaura Carraso Alvarez
Voadika ny 06 Mey 2021 4:40 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, русский, عربي, Français, Ελληνικά, Español
Saripika avy amin'i JonRo/Flickr (CC BY-NC 2.0)
Tsy nahasakana ny fitomboan'ny fahatongavan'ireo mpifindramonina any Eoropa izay nanomboka tamin'ny fitsoahan'olona an-tapitrisany maro avy any Syria izay nanamarika ny tsingerin-taona faha-10 ny ady ny areti-mandringana COVID-19.
Iray amin'ireo ivon'ireo hetsika fifindra-monina ireo ny nosy Canary any Espaina. Tamin'ny taona 2020, mpifindramonina miisa 23000 no tonga tany amin'ny Nosy Canary, iray amin'ireo vondrom-piarahamonina mizakatena 17 ao Espaina ahitana nosy valo, eo amin'ny 95 km miala ny kaontinanta afrikanina ary misy mponina roa tapitrisa.
Tsy avy amin'ny ranomasina avy aty Afrika ihany ny mpifindramonina. Sahabo ho 90 isanjato no mpifindramonina amerikanina latina tonga amin'ny fiaramanidina. Na izany aza, matetika ny media no mifantoka amin'ireo mpifindramonina avy any amin'ny kaontinanta afrikanina.
Miatrika sakana maro samihafa ireo mpifindramonina teny an-dalana sy rehefa tonga ao amin'ny Nosy Canary. Niteraka fifandroritan-kevitra teo amin'ny FTMF miasa miaraka amin'ireo mpifindramonina sy ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta any Espaina ny raharaha.
Ohatra iray ny fanavotana zazavavy kely 2 taona izay, niaraka tamin'ny reniny sy ny rahavaviny, tonga avy tany Mali tao amin'ny seranan-tsambon'i Arguineguín tao amin'ny Nosy Grand Canary tamin'ny volana marsa tao anaty toe-javatra mafy dia mafy. Nentina tany amin'ny hopitaly ilay zazavavy kely taorian'ny andram-pameloman'aina nataon'ny mpitsabo lefitra teo amin'ny fitodian-tsambo nidirany. Nodimandry ny alahady 21 marsa lasa teo izy noho ny fijanonan'ny fitempon'ny fo.
Niteraka fanehoan-kevitra miavaka ity tranga mampalahelo ity. Na ny filohan'i Espana, Pedro Sánchez, sy ny mpitarika ny mpanohitra, Pablo Casado, dia namoaka fanambarana maneho fiaraha-miory. Tao amin'ny tambajotra sosialy no nanehoan'ny olona ny fisaritahany tamin'ny fahafatesan'ilay zazavavy kely.
Hetsika iray hafa tsy nampoizina dia ny fahafatesan'ny olona telo nateraky ny fivadihan'ny sambo iray nandritra ny famonjena azy tamin'ny 26 marsa.
Nisy ihany koa diabe fanoherana ny mpifindramonina tany amin'ny vondronosy Canary, nahitana hetsika fankahalam-bahiny sy fanitsakitsahana ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina najoron'ny manampahefana.
Inona ity nataon'ny Vokovoko Mena?
Tamin'ny faran'ny volana febroary 2021, mpifindra monina 64 no voaroaka avy tao amin'ny toby iray tao amin'ny nosy Canary ary navela teny an-dalambe, nampitombo ny isan'ny mpifindramonina izay efa ao anatin'ny toe-javatra mampivarahontsana. Nilaza ireo mpifindramonina voaroaka fa natao izany izy ireo taorian'ny nandavany ny hiray tranolay amin'ny vondrona hafa satria mety tsy ho azon'izy ireo arahana ny fepetran'ny tsy fifampikasohana mandritra ny areti-mandringana.
Manoloana ny fiampangana dia nanambara ny Vokovoko Mena fa nanao hetsika mahery setra ireo mpifindramonina ireo ary misy ny sasany tsy maniry ny hanohy ny diany hifindra monina, nitsipaka ny fanampian'ny Vokovoko Mena. Nolavin'ireo voaroaka io fanehoan-kevitra io.
Ho setrin'ny fandroahana ireo mpifindramonina avy ao amin'ny toby fantatra amin'ny anarana hoe Toby 50, nanameloka ny fomba nitantanan'ny Vokovoko Mena ny mpifindramonina ny hetsika firaisankina toy ny Sehatra Firakisankina amin'ny Vahoaka Mifindrafindra (fantatra amin'ny hoe Somos Red amin'ny Espaniôla) izay ahitana olom-pirenena, vondrona sy fikambanana.
Tsy mitovy hevitra amin'ny tsy fahampian'ny fitaovana ho an'ireo mpifindramonina sy ny tsy fahalianana asehon'ireo andrim-panjakana amin'ny toe-javatra iainan-dry zareo ny mponina akaikin'ny toby. Nanohana ireo mpifindramonina ny mponina tamin'ny fanomezana sakafo sy bodofotsy mba hanafana azy ireo mandritra ny alina. Nanatontosa fihaonana isan-karazany ny sehatra Somos Red niaraka tamin'ny manampahefana ao an-toerana, nanasongadinana ny lesoka amin'ny tetipanorona napetraka amin'ireo nosy ireo. Notakian-dry zareo ihany koa ny hanaovan'ny governemanta Espaniola, sy amin'ny Vondrona Eoropeana, hetsika maika.
Tamin'ny fiandohan'ny volana marsa, ny Fanjakan-printsy ao Asturias, vondrom-piarahamonina iray hafa mizaka tena any avaratr'i Espaina, nanolo-tena hampiantrano ireo zaza tsy ampy taona tsy miaraka amin'olondehibe ao amin'ny Nosy Canary. Hampiantrano zaza tsy ampy taona miisa 200 miaraka amin'i Asturias ny vondrom-piarahamonina mizaka tena valo hafa. Amin'izao fotoana izao dia mikarakara zaza tsy ampy taona miisa 2.500 ny governemantan'ny vondrom-piarahamonina mizaka tena ao amin'ny Nosy Canary.
Tsy vao izao ny Vokovoko Mena no niorehana. Voatsikeran'ireo sehatra hafa amin'ny mponina ihany koa izy. Tamin'ny faran'ny taona 2020, tafaporitsaka ny horonantsary iray ahitàna ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Vokovoko Mena sy vondron'olona mpifindramonina hita mandihy nefa tsy manaja ny fepetra tsy fifampikasohana. Tsy tahaka ny fanohanan'ny Canary mpifanila vodirindrina taloha ireo mpifindramonina fa niteraka andiana hetsi-panoherana mpifindramonina tao amin'ny tambajotra sosialy ity tranga ity sy nanoheran'ireo olom-pirenena ny mpifindra monina. Niala tsiny ampahibemaso ny Vokovoko Mena noho ny fihetsiky ny mpilatsaka an-tsitrapo ao aminy, izay nisy fiatraikany ratsy teo amin'ny sarambabem-bahoaka.
Mpifindramonina tsy misy fialokalofana
Ny fahasarotana amin'ny haha-ara-dalàna ireo mpifindramonina no iray amin'ireo antony mahatonga an'io toe-javatra mafy dia mafy io any amin'ireo nosy ireo. Any amin'ny nosy Canary, ny totalin'ny fangatahana fiarovana iraisampirenena napetraka dia 3.984 amin'ireo 23.000 tonga ao amin'ny vondronosy.
Antony iray hafa ny tsy fahampian'ny vaovao, satria mpifindramonina maro no tsy mahalala fa manan-jo hangataka fialokalofana na fiarovana iraisampirenena izy ireo. Ankoatra izay, tsy ampy fitaovana ny vondronosy hizorana amin'ny fangatahana fialokalofana izay mitaky mpiaro ny vahoaka afaka manampy araka ny tokony ho izy ny mpifindramonina, sy mpandika teny eo noho eo hanamorana ny asa ara-pitsarana.
Tamin'ny taona 2020, olona 5 700 no nahazo fiarovana iraisampirenena tany Espaina, izay maneho ny 5 isanjaton'ny nanao fangatahana. Araka ny tatitra nataon'ny vaomiera espaniola ho an'ny fanampiana ny mpitsoa-ponenana (CEAR), Aorian'i Frantsa sy i Alemana i Espana amin'ny resaka fanomezana fialokalofana ho an'ireo mpitsoa-ponenana, na dia izy aza no firenena nahazo ny fangatahana fialokalofana betsaka indrindra.
Nanambara ny minisitry ny raharaham-bahiny espaniola, Arancha González Laya, fa amin'izao fotoana izao dia misy adihevitra eo amin'ny sehatry ny Vondrona Eoropeana handaminana ny fifindra-monina sy ny fialokalofana. Mampitombo ny fisian'asa any amin'ireo firenena niaviany sy nandalovana, toa an'i Maraoka sy Libya, ny fepetra sasantsasany noheverina hanatsarana ny toe-draharaha ara-tsosialy sy ara-toekarena, ary hatao famotorana ireo fikambanan-jiolahy tafiditra amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko.
Fanavaozam-baovao: nahitsinay ny toerana ara-jeografika an'ireo Nosy Canary, izay 95km miala ny kaontinanta Afrikana, fa tsy kaontinanta Eoropeana.
Amerika Latina 25 Oktobra 2021
Borkina Faso 19 Jona 2021
Mediam-bahoaka 23 Marsa 2021